Tsy misy Hotely mahazatra: manome vahaolana vaovao i St. Regis amin'ny olana ara-tsosialy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Tsy misy Hotely mahazatra: manome vahaolana vaovao i St. Regis amin'ny olana ara-tsosialy
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Tamin'ny 1904, ny kolonely John Jacob Astor dia namaky ny tany ho an'ny fananganana ny Hotel St. Regis eo an-joron'ny Fifth Avenue sy ny 55th Street ao amin'ny faritra fonenana manokana any New York tamin'izany fotoana izany.
Ireo mpanao mari-trano dia i Trowbridge sy Livingston izay monina any New York.
Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny orinasa dia i Samuel Beck Parkman Trowbridge (1862-1925) sy Goodhue Livingston (1867-1951).
Trowbridge nianatra tao amin'ny Trinity College any Hartford, Connecticut. Tamin'ny diplaomany tamin'ny taona 1883 dia niditra tao amin'ny University of Columbia izy ary nianatra tany ivelany tany amin'ny American School of Classical Studies any Athens sy ao amin'ny Ecole des Beaux-Arts any Paris.
Rehefa niverina tany New York izy dia niasa tamin'ny mpanao mari-trano George B. Post. Goodhue Livingston, avy amin'ny fianakaviana manan-kaja any New York mpanjanatany, dia nahazo ny mari-pahaizana licence sy diplaoma avy amin'ny University Columbia. Tamin'ny 1894, Trowbridge, Livingston ary Stockton B. Colt dia nanao fiaraha-miasa izay naharitra hatramin'ny 1897 rehefa lasa i Colt. Ny orinasa dia nanamboatra tranom-panjakana sy fivarotana marobe malaza any New York City. Ankoatry ny St. Regis Hotel, ny malaza indrindra dia ny fivarotana lehibe B. Altman (1905) tao amin'ny 34th Street sy Fifth Avenue, ny Bankers Trust Company Building (1912) ao amin'ny 14 Wall Street ary ny JP Morgan Building (1913) ampitan'ny arabe.
Tamin'ny 1905, ny St. Regis no trano fandraisam-bahiny avo indrindra any New York, mijoro amin'ny haavo 19 ambony. Ny vidin'ny efitrano iray dia $ 5.00 isan'andro. Rehefa nisokatra ny trano fandraisam-bahiny, dia nilazalaza ny St. Regis ho toy ny “hotely manankarena indrindra sy manankarena indrindra eran-tany” ny gazety.
Ny vidin'ny fanamboarana dia 5.5 tapitrisa dolara mahery, vola tsy heno tamin'izany. Tsy nitsitsy vola i Astor tamin'ny fanaka: gorodona vita amin'ny marbra sy lalantsara avy amin'ny tokotanin'i Caen, fanaka Louis XV avy any Frantsa, fitoeran-jiro kristaly Waterford, paosin-dravina ary tapis tatsy atsinanana, tranomboky feno boky vita amin'ny volamena vita amin'ny hoditra, vita amin'ny volamena. Nametraka varavarana fidirana varahina mirehitra roa nopetahana tsara izy, fanaka hazo tsy fahita firy, fatana marbra lehibe, valindrihana firavaka ary telefaona isaky ny efitrano, izay tsy fahita tamin'izany fotoana izany.
Rehefa nisokatra ny trano fandraisam-bahiny St. Regis tamin'ny 1905, ny General Manager Rudolf M. Haan dia namoaka boky fampandrenesana 48 pejy feno sary feno sary sy sary 44 ary prosa mahafinaritra:
Hotely St. Regis
“Amin'ny fanoratana ny St. Regis Hotel dia ilaina ny mahatadidy fa tsy karazana hotely tsotra no ifandraisanay, fa ny vahaolana amin'ny olana ara-tsosialy noteren'ny toe-javatra ankehitriny. Ny fotoana dia ny trano fandraisam-bahiny nampiseho fialofana fotsiny ho an'ny mpandeha; amin'izao andro izao, na izany aza, dia tsy maintsy ampamoahina miaraka amin'ireo olona manana trano tsara ihany koa, izay mahita fa mety ny manidy ny tranony mandritra ny herinandro na volana vitsivitsy; olona izay nieritreretana ny handraisana ny fampiononana ao an-trano, ny serivisy tsara ary ny sakafo, ary ny rivo-piainana amin'ny fanandramana sy fanatsarana dia nanahirana hatrizay. Mba hikarakarana manokana an'ity kilasin'ny Amerikanina ity amin'ny teny mety, tsy atao ambanin-javatra ny vahiny na ny alina na ny herinandro tokana, na ny fisakafoanana tsy dia mahazatra loatra, dia ny hevitr'Andriamatoa Haan, ny filoha ary ny fanahy mpitarika ny orinasa. Amin'ny fankatoavany avy amin'ny Col. John Jacob Astor sy ny fiaraha-miasa matihanin'ireo mpanao mari-trano, Messers. Trowbridge & Livingston, ny St. Regis amin'ny Fifty Fifty Street ary Fifth Avenue dia mijoro ho tsangambato…
Ny St. Regis dia mitazona velaran-tany 20,000 XNUMX metatra toradroa, ary amin'izao fotoana izao dia ny hotely avo indrindra any New York. Voafidy tsara ny toerana misy azy, satria, na dia eo afovoan'ny faritra fonenana tsara indrindra any New York aza, eo amin'ny làlambe misy lamaody ao an-tanàna sy ao anatin'ny sakana efatra amin'ny Central Park, dia mora azo avy amin'ny lalana rehetra, ary ny ankamaroan'ny fivarotana tsara indrindra eto an-tanàna , ary koa ireo toeram-pilalaovana fialamboly, dia lavitra lavitra. Ho an'ireo izay maniry ny hitondra fiara, dia vonona ny andro aman'alina ny serivisy fitaterana kalitao mahomby…
Ny departemantan'ny fahadiovana sy ny fiarovana dia fananana roa ihany koa, izay ampiasain'ny St. Regis voalohany indrindra amin'ny fatra feno - ny fandaminana ny rivotra madio sy ny endrika vovoka ary fako. Misy rafitra ventilation an-tery napetraka miaraka amin'ny taratra ankolaka izay manome rivotra madio sy madio mandritra ny trano, mafana na mangatsiaka satria mety hitaky ny toetr'andro… ..
Isaky ny efitrano misy rihana efatra na dimy no natokana hidiran'ny rivotra ivelany, dia sivana amin'ny sivana lamba fromazy, nohafanaina tamin'ny alàlan'ny coil etona, ary avy eo nivezivezy tamin'ny alàlan'ny fantsona nankany amin'ireo efitrano isan-karazany. Ireo toeram-pivoahana ao amin'ny efi-trano dia miafina amin'ny gadona tsy manelingelina amin'ny rindrina na amin'ny asa vita amin'ny varahina haingon-trano izay mandray anjara lehibe amin'ny haingon-trano. Ny vahiny dia afaka mifehy ny mari-pana ao amin'ny efitranony amin'ny alàlan'ny thermostat mandeha ho azy. Ny rivotra mivezivezy tsy tapaka dia voatazona manerana ny trano, na andro na alina: tsy misy drafitra, tsy misy hatsiaka ny rivotra iainana atahorana; raha ny marina dia tsy mila manokatra ny varavarankeliny mihitsy ny vahiny mba hamatsiana rivotra madio be dia be. Ity rafitra ity dia fandrosoana lehibe mihoatra ny coil taloha izay tabataba sy ratsy tarehy ary somary tsy azo antoka amin'ny habetsaky ny hafanana omena. Ny rivotra maloto dia avoakan'ny mpankafy fampiasa amin'ny fomba mahomby. ”
Ilay trano ambadiky ny trano tena zava-dehibe dia nekena ary nofaritana tao amin'ny boky Hotel St. Regis:
WestJet izao dia mila vaksiny COVID-19 feno ho an'ny rehetra ...